Sanduuqa ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'Graphite Box' ee soosaarayaasha budada anode iyo Warshad | Ningxin
Sanduuqa Graphite ee budada anode
Jaantus sanduuqa (garaafka doonta) lafteeda waa side, waxaan ku dhejin karnaa alaabta ceeriin iyo qeybaha aan u baahanahay si aan u helno ama u dhameystirno naqshadeynta wadajirka ah ee kuleylka heerkulka sare. Sanduuqa garaafku wuxuu ka samaysan yahay garaaf macmal ah oo lagu farsameeyo farsamada. Markaa mararka qaarkood waxaa loogu yeeraa sanduuqa garaafka, marna waxaa loogu yeeraa garaaf garaaf leh. Sanduuqa garaafka waxaa badanaa loo isticmaalaa foornooyinka kala-soocda faaruqinta kala duwan, foornooyinka induction, foornooyinka sintering, foornooyinka brazing, ion foornooyinka nitridation, foornada dhalaalka ee taralum niobium, foornooyinka demiya, iwm.
1. Degganaanta kuleylka: loogu talagalay isticmaalka xaaladaha kulul iyo kuwa qabow, daaweyn gaar ah si loo hubiyo kalsoonida tayada wax soo saarka.
2. Iska caabinta daxalka: qaab isku mid ah iyo qaab dhismeed qalab fiican, dib u dhig ku nabaad guurka isticmaalka darajooyinka.
3. caabbinta saamaynta: awoodda u adkaysiga naxdinta kuleylka badan, marka howsha waa la xaqiijin karaa.
4.Acid iska caabinta: ku darista qalabka qaaska ah waxay si weyn u wanaajisay sifooyinka jireed ee maaddada, waxqabadka aad u wanaagsan marka loo eego caabbinta aashitada, waxayna si weyn u dheereysaa nolosha adeegga garaafka.
5. Qabsashada kuleylka sare: ka kooban sare ee kaarboonka go'an wuxuu hubiyaa habsami u socodka kuleylka, wuxuu gaabiyo waqtiga kala-baxa, wuxuuna si weyn u yareeyaa isticmaalka tamarta.
6. Xakamaynta wasakhda: xakamaynta adag ee ka kooban maaddada, si loo hubiyo in wasakhaynta maaddada si weyn loo yareeyey.
7. Xasiloonida tayada: teknoolojiyad sameynta istiraatiijiyad isku mid ah oo nidaamsan, nidaam iyo nidaam xakameyn tayo leh oo si buuxda u hubiya xasilloonida maaddada.
8. Tikniyoolajiyadda farsamaynta horumarsan, dulqaadka iyo muuqaalka ayaa ka wanaagsan heerarka macaamiisha;
9. Xirfadlayaal aqoon u leh warshadaha la xiriira macaamiisha, waxay ku siin karaan habeyn xirfadeed iyo adeegyo taageera.
Taxaddarrada marka la isticmaalayo sanduuqa garaafka:
1. Tiirarka garaafka sanduuqa garaafka waa inuu ahaadaa mid taagan oo xasilloon: tiirarka garaafka sanduuqa waa in lagu taageeraa clips-ka dabka u adkaysta si looga ilaaliyo inay ku wareegaan heerkulka sare. Tiirka sanduuqa garaafka ee ku yaal giraanta dibedda waa inuusan u janjeerin derbiga foornada, laakiin waxaa laga yaabaa inuu xoogaa u janjeedho bartamaha foornada.
2. Ka dib buuxinta foornada, xir albaabka foornada: albaabka kiliyaha waa in la doorbido in lagu dhiso lebenyo diidan oo ku yaal lakabyada gudaha iyo dibedda. Lakabka gudaha waa inuu la socdaa darbiga hoose ee gidaarka foornada, lakabka korena waa inuu la raacaa darbiga kore ee gidaarka foornada, lakab walbana waa in lagu rinjiyeeyaa. Dhoobo dabka. Markii aad dhiseysid albaabka foornada, ka tag daloolka dabka ee fiirsashada, booska godka fiirsashada dabka waa in la hagaajiyaa mar kasta oo foornada la rakibo si looga fogaado lama filaan ah sare iyo hoose, weyn iyo yar, taas oo saameyn ku yeelan doonta cabbirka heerkulka saxda ah.
3. Dhererka khaanadda garaafka garaafka: waa in lagu go'aamiyaa iyadoo loo eegayo qaab dhismeedka foornada iyo kor u kaca heerkulka qaybaha kala duwan ee foornada. Guud ahaan, khaanadda garaafka sanduuqa ku dhow hawo mareenka waa inuu ka hooseeyaa si loo yareeyo caabbinta ololka inuu kaco. In kasta oo khaanadda garaafka ee dhexda ku taal ay sii dheereyn karto, haddana waa inuu jiraa meel ku filan inta u dhexeysa dusha dabka iyo ololka sii kacaya si ay halkan isugu yimaadaan, ka dibna dib loogu qaybiyo waddooyinka dabka ee godadka dabka qabadsiinaya.
Baako: kiiska alwaaxda caadiga loo dhoofiyo.
Faahfaahinta Gaarsiinta: 15 ~ 30 maalmood oo shaqo kadib xaqiijinta amarka.
Dekedda Badda: Shanghai ama dekedda kale ee Shiinaha Dhul Weyn.
Hore: Meel Shaxan
Xiga: Doonta loo yaqaan 'Graphite Boat' oo loogu talagalay bateriga Lithium iron phosphate
Sanduuqa Carbon Graphite
Sanduuqa Graphite ee Budada Kaarboon-Kariyaha
Sanduuqa Garaafka ee Daawaha adag
Sanduuqa Qaboojinta Graphite
Sanduuqa Caaryada Garaafka
Sanduuqa Garaafka Batariga Llithium
Doonta loo yaqaan 'Graphite Boat' oo loogu talagalay bateriga Lithium iron phosphate
Qaybaha Dayactirka Graphite, Doonta Garaafka Semi-Wareegga ah, Garaafka Sawirka, Iskuduwaha Garaafka, Doonta Garaafka Labaad, Weelka Kaarboon Garaafka,